ပထွေးက ဟိုတယ်ကို ခေါ်သွားပြီး မုဒိန်းကျင့်မယ်မှန်းသိလို့၊ ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကခုန်ချပြီး ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး – Burmese Online News
အသက်(၁၁)နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးဟာ သူမရဲ့ပထွေးဖြစ်သူက သူမကို ကျောင်းမပို့ဘဲ၊ ဟော်တယ်ဆီကို ခေါ်သွားမှန်းသလို ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ ခုန်ချပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း WorldOfBuzz သတင်းက ဖော်ပြထားပါတယ် …. ။ ဒီအကြောင်းကို ApannPyay က ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ် …. ။
ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာကာတာမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ ကောင်မလေးရဲ့အမည်ကိုတော့ Bunga လို့ အမည်ပြောင်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါတယ် … ။ သူမရဲ့ ပထွေးကတော့ အသက်(၅၀)နှစ်ပါ … ။ သူဟာ ကလေးမလေးကို ကျောင်းပို့မယ်ဆိုပြီး၊ ဟိုတယ်ဆီကို ခေါ်သွားဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ။
အဲဒီကလေးမလေး တက်နေတဲ့ကျောင်းကတော့ Samarinda, Kalimantan Timur မှာ တည်ရှိပါတာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။ သူမဟာ ဟော်တယ်က ကျောင်းရှေ့မှာမရပ်ဘဲ ဟိုတယ်ဆီကို ဦးတည်နေတာသိလို့ ခုန်ချပြီး ထွက်ပြေးခဲ့တာပါ …. ။
Bunga ရဲ့ဆရာ/မတွေက ဒီအကြောင်းကို ရဲကို တိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ Bunga ဟာ ဒီမတိုင်ခင်တုန်းက ပထွေးဖြစ်သူရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားနှောက်ယှက်မှု အကြိမ်ကြိမ် ခံခဲ့ရတာကြောင့်၊ အခု ပထွေးရဲ့အကြံသာ အောင်မြင်ခဲ့ရင် ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ သူမကိုယ်တိုင် တွေးနေမိမှာပါ။
ပထွေးအကြောင်း မိခင်ကို တိုင်ကြားတုန်းက- မိခင်က မသိကျိုးကျွန်ပြုခဲ့ပါသတဲ့။ အကြောင်းကတော့ သူမရဲ့ ဒုတိယခင်ပွန်းက သူမကို ပစ်သွားမှာစိုးလို့ပါလို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိခင်ကိုယ်တိုင်က အလိုတူအလိုပါ လုပ်ခဲ့တာ ဆိုရမှာပါ။ ပထွေးနဲ့ မိခင်နှစ်ဦးစလုံးကို Samarinda Seberang Police Station က ဖမ်းထားပါတယ်။
Source : aungparsay.co
ဗစ်တိုးရီးယားအတွက်အမှန်တရားရှာဖွေဖို့ ရန်ကုန်မြို့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဆန္ဒပြတော့မည်
လူတစ်ယောက်ကိုသေအောင် နောက်ပြောင်ခြင်းကို မပြုလုပ်သင့်ပါ ဒီနေ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံ့ကြီးကနေ ထိန်ပင်ပို့မယ့် အလောင်း သယ်ဖို့သွားရင်း သေဆုံးသူရဲ့ ဇနီးနဲ့တွေ့တော့
ကုန်းကုန်းကွကွ နဲ့ မိုးရွာမရှောင် နေပူမရှောင် တံတားပေါ်မှာ တွေ့ရလို့ မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ